Murashaxiin Cududda taageerayaashooda ku soo bandhigay Ololihii maanta ee Xisbiga Waddani | Berberanews.com
Home WARARKA Murashaxiin Cududda taageerayaashooda ku soo bandhigay Ololihii maanta ee Xisbiga Waddani
Murashaxiin Cududda taageerayaashooda ku soo bandhigay Ololihii maanta ee Xisbiga Waddani
Hargeysa (BerberaNews)- Guddoomiyaha Xisbiga Muaaradka ah ee Waddani abdiraxmaan Maxamed abdilaahi oo ay weheliyaan saddex murashax oo taageero miisaan leh ku leh gobollada Maroodijeex iyo Gabiley, ayaa maanta lagu soo dhaweeyey degmada Tog-Wajaale ee Gobolka Gabiley.
Murashaxiinta guddoomiyaha ku wehelinayey sodaalkiisa, ayaa kala ah Caydaruus Cabdisamad Muxumed oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Hargeysa, Eng Axmed Cabdi Ibraahim oo u tartamaya golaha Wakiillada gobolka Maroodi-jeex iyo Maxamed Cabdi Cabdilaahi oo isaguna u tartamaya golaha Deegaanka degmada Gabiley.
Murashaxiinta oo qayb ka ahaa Ololaha Murashaxiinta Xisbiga Waddani oo maanta soo gebo-gabeeyey Maalmaha ololaha saddexda Xisbi Qaran, waxa soo dhaweyn ballaadhan ku qaabilay taageerayaashooda degmada Wajaale oo ku gaashaaman Calanka Xisbiga Waddani iyo Astaamaha Murashaxiinta.
Soo dhaweynta weftiga guddoomiyaha iyo murashaxiinta oo ahayd mid aan loo kala hadhin waxa qayb ka ahaa taageerayaal wata Fardo loogu gaashaamay Calanka Xisbiga iyo alanka Xisbiga Waddani.
Saddexda Murashax oo goob-fagaare ah kula hadlay taageerayaashooda, ayaa soo bandhigay barnaamijyadooda wax-qabad ee ay ka iibinayaan taageerayaasha oo ay Codsadeen inay codkooda siiyaan uguna hiiliyaan maalinta codaynta.
“Waxaan idinka mahad-naqaynaa soo-dhaweynta aad nagu qaabiisheen iyo sida aad qorraxda noogu xamisheen, waxaanu idinka Codsanaynaa inaad maalinta doorashada Codkiina na siisaan,” sidaas waxa yidhi Murashax Maxamed Cabdil Cabdilaahi.
Saddexda Murashax oo ku guda-jira olalahooda, ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa, waxaanay taageeerayaashooda oo si diyaarsan isu soo abaabulay kulan ballaadhan kula qaateen garoonka Dhalinta ee xaafadda Jigjiga yar, halkaas oo ay iska soo buuxiyeen taageeraal tiro badan oo lulaya Astaamaha saddexda murashax iyo alanka Xisbiga Waddani.
Caaqil Dayib Mowliid Axmed oo ugu horeyn hadal ka jeediyey madasha, ayaa taageerayaasha ku boorriyey inay Codkooda ku garan-istaagaan murashaxiinta oo ku tilmaamay inay yihiin kuwo dalka iyo dadkuba u baahan yahay.
Murashax Axmed Cabdi Ibraahim iyo Caydaruus Cabdisamad Muxumed oo gebo-gabadii hadallo ka jeediyey kulanka, ayaa mahad-naq ay taageerayaasha u jeediyeen kaddib, waxa ay ka Codsadeen inay Codkooda siiyaan, ku hubsadaan astaamha iyo Calaamadaha ay leeyihiin.
Previous articleTacsi Marxuum Xaaji Maxamed Beergeel إنا لله وإنا إليه راجعون
Next articleHamigii Erdogan ee 27ka sano oo u hirgashay inuu furo Masjidka Fagaaraha Taksim